Ngaba unawo amandla e-Psychic? Isikhokelo esipheleleyo sokuFumanisa - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Ngaba unawo amandla e-Psychic? Isikhokelo esipheleleyo sokuFumanisa
Ngaba unawo amandla e-Psychic? Isikhokelo esipheleleyo sokuFumanisa
Xa ucinga ngamakhono obuchwephesha unokucinga ngeebhola zekristale kunye nabafazi abadala abagqunywe kwizikhafu besithi banezipho ezizodwa abazinikiweyo ukusuka kwisiqalekiso samandulo se-gypsy. Kumnandi njengokuvakala, ayisiyiyo nyani yokuba namandla e-psychic. Amandla e-Psychic anokuzibonakalisa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kwaye anokufumana indlela eya ezingqondweni zazo zonke iintlobo ezahlukeneyo zabantu-abaqhelekileyo, abanamahloni, abangafaki zirhafu. Ngapha koko, kuya kuba sengqiqweni ngokupheleleyo ukuba uzibuze: yenza Mna ubuchule bengqondo? Kungenxa yokuba unakho
Thatha ukufunda kwaye unokufunda into entsha malunga nawe, kwaye mhlawumbi ufumane nenkqubela phambili entsha apha endleleni.
Kunokuba nzima ukucacisa ukuba ingaba unazo ezi zakhono zikhethekileyo, ngakumbi ukuba awuzange ucinge ngenene ngazo ngaphambili. Indawo yokuqala onokuthi uthethe kuyo yinyani yokwenene kwaye ugqibezele ukufunda kwakho. Iiwebhusayithi ezinje Ingqondo yeHlabathi zilungele oku, ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo zengqondo ngokulula, kwaye ngokulula, ziyafumaneka ukuze zifundwe.
Inyathelo elilandelayo kuhambo lwakho kukujonga zonke iintlobo ezahlukeneyo zobuchule bengqondo kwaye uzame ukufumanisa nayiphi na imiba yezakhono onokuzibona ngaphakathi kwakho. Inokuba ngumsebenzi omkhulu: ukuhlela kwisichazi-magama sobuchule kunye nokwenza lonke olo phando ukubona ukuba unawo na amandla okungena kuwo. Ke senze umsebenzi wakho saza sahlanganisa uluhlu olubanzi, ekulula ukulufunda-ngaphakathi kuluhlu lwezakhono kunye noko kubandakanya.
Iirekhodi zeAkashic zokuFunda
I-Akasha yindawo ephezulu ukusuka kuleyo sihlala kuyo-apho kugcinwa khona yonke ingcinga kunye nesenzo owakha wanaso okanye oya kuba naso. Ukubanakho ukucofa kwiiRekhodi zeAkashic kukwazi ukuqonda nokubonelela ngeziphumo ezinokubakho kwikamva, kunye nokuqonda okungcono okwadlulayo.
Ngokufundwa kweengelosi, oosiyazi kufuneka bathembele kwi-intuition kunye ne-clairvoyance ngelixa besebenzisa indawo yamakhadi eengelosi. Ngokusebenzisa amakhadi, oosiyazi bayangena kwiingelosi eziya kuthi emva koko zibonelele ngengqondo kunye nokhokelo lwazo ngokomoya nakubani na ababukeleyo.
Ii-Psychics ezinonxibelelwano ikakhulu olunzulu kwizilwanyana zinokuziqhelanisa nokufunda kwezilwanyana. Oku kusebenza njengalo naluphi na ufundo lwengqondo, ngaphandle kwamandla kujolise ekutolikeni nasekucofeni kwi-psyche yesilwanyana. Sisakhono esinokunceda abantu baziqonde ngcono izilwanyana abazithandayo.
Ikwabizwa ngokuba yi-psychography, ukubhala okuzenzekelayo yinto yokuba ukwazi ukuvelisa ukubhala ngokuthe ngqo kubuchule bakho bengqondo. Amagama afike ephepheni evela kwisimo se-psychic anokuvela kwi-subconscious okanye kwanangaphezu kwendalo.
Ukuze ukwazi ukucoca i-chakra yomntu, kufuneka uqale ukwazi ukufunda amandla abantu, ukuqonda xa i-chakras zivaliwe, kwaye wazi ukuba kufuneka kwenzeke ntoni ukuseta kwakhona loo mandla. Zibuze: xa ukufuphi nomnye umntu - ngaba uyakhawuleza ukuqaphela ukuba ziphantsi okanye zinamandla aphezulu? Mhlawumbi ungatsho kwangoko ukuba bakwimeko yeemvakalelo? Ukuba oku kuvakalelwa ngathi luhlobo lwesakhono onaso-ukucocwa kwe-chakra kunokuba kwinqanaba elilandelayo kwi-repertoire yakho yengqondo.
I-Clairvoyance kukukwazi ukubona ikamva. Ukuba ukhe wanikezela ngeemvakalelo okanye isisu malunga neziganeko ezingekenzeki - kuphela ukuba zenzeke emva kwengqikelelo yakho, ngokuqinisekileyo ungomnye wemiphefumlo enethamsanqa ngamandla e-clairvoyance
ICartomancy luhlobo lokuxela ithamsanqa olusebenzisa umgangatho osemgangathweni wamakhadi. Abathengisi baseCartomancers baya kuzothula uthotho lwamakhadi ukusuka kumgangatho kunye nokubanakho ukuwatolika njengesixhobo sokuvumisa.
Ukubhula ngamanani bubudlelwane obuyimfihlakalo phakathi kwenani nesiganeko esihambelanayo. Ngaba uqaphele ukuba unobuhlobo obukhethekileyo kunye namanani? Mhlawumbi amanani athile avela ebomini bakho anokuhambelana ngokuthe ngqo neziganeko ezidlulayo? Emva koko unokuqwalasela ukubala ngamanani njengenxalenye yomdla.
Ukufundwa kweTarot ekwi-Intanethi
Ukufundwa kwetarot kwi-Intanethi yindlela eyaziwayo, yanamhlanje yobugcisa obudala. Ngokufana ne-cartomancy, abafundi bekhadi le-tarot bakhetha kumgangatho othile wamakhadi kwaye batolike ubutyebi bomntu kumakhadi atyiweyo. Kuthatha ukugxila okukhulu, ukuqonda, kunye nesakhono ukuze ukwazi ukusebenzisa i-tarot kungathatha ixesha kunye noqeqesho ngaphambi kokuba amandla akho abonakale.
Ukufundwa kwezithombe kukukwazi ukujonga ifoto kwaye ufumane ulwazi lwengqondo olusuka kwisifundo esibonisiweyo. Mhlawumbi ifoto yomntu othandekayo odlulileyo okanye umhlobo ohamba neengxaki ezikhoyo. Ifoto yokufunda i-psychic iya kuba nakho ukujonga izinto ezidlulileyo, ezikhoyo kunye nezexesha elizayo.
I-psychic medium ngumntu onomdla okwazi ukunxibelelana nemimoya engaphaya kommandla wethu. Banokufunda kwaye bayiqonde ngokunzulu imiphefumlo yabaphilayo kunye nokuba nakho ukunxibelelana nemiphefumlo yabo badlulayo. Amandla okuba sisimo sengqondo ngokufuthi kulula ukubachonga ngaphakathi kuwe kuba banobukho obomeleleyo ekunzima ukububetha ngoyaba.
Ukufundwa kweSoulmate kukufundwa okunokuqikelela umphefumlo womntu. Yindlela ethile ye-tarot okanye ukufundwa kwengqondo ejolise ekunxibelelaneni nemiphefumlo emibini ekusenokwenzeka ukuba ayifumaneki.
Ukuphilisa ngokomoya kuyafana nokuhlanjululwa kwe-chakra. Umphilisi uyakwazi ukuhambisa amandla kaThixo emzimbeni ukuze akhuthaze ukuphiliswa komzimba kunye nomphefumlo.
Ukufundwa kwamakhadi eesimboli
Amakhadi eesimboli ahlukile kwi-tarot kodwa ayafana ngengqondo. Ngumsebenzi wobugcisa wale mihla, kwaye abo banokufunda amakhadi bayakwazi ukutyhila iimfihlelo ezinzulu zengqondo nezomoya zalowo ufundwayo. Ukufundwa kunokubangela ukukhula ngokomoya nangokomntu.
Ukufunda iti yamagqabi
Ikwabizwa ngokuba yi-tasseography, ukufunda amagqabi eti yinkqubo yakudala. Inkqubo yeli khono lobuchwephesha ibandakanya ukwenza ikomityi yeti kunye namagqabi eeti evulekileyo kunye nokuhambisa amandla akho emagqabini ukuze baphendule nawuphi na umbuzo wokomoya onokuba nawo. Ukuba yenziwe ngokuchanekileyo, ipateni apho amagqabi ahlangana khona ezantsi kwendebe iya kuba nempendulo yakho.
Ukuhlolwa kwephupha kukukwazi ukutolika amaphupha. Ingqondo ikhululeke kakhulu ebuthongweni bethu, kodwa iziganeko ezenzeka kumaphupha ethu kunokuba nzima ukuziqonda. I-psychic enesakhono sokuhlola amaphupha iyazi ukuba kuthetha ukuthini imifanekiso ethile kwaye inokucacisa ukuba amaphupha ethu angazama ukusixelela ntoni.
UReiki luhlobo lwaseJapan lokunyanga amandla. Abo banobuchule kwi reiki bayakwazi ukuphilisa ngokusetyenziswa kwezandla zabo ukuziva kunye nokutshintsha i-aura ephoswe ejikeleze umzimba. Ifuna intuition eyomeleleyo ngeeuras kunye namandla omntu.
Yikholwe okanye ungakholelwa, ezi ayizizo zonke izakhono zengqondo ezinokubakho. Le yikhosi nje yokuqhekeka kwabaqalayo othembela kuyo ukuqala ukubona umhlaba omkhulu kwaye wanamhlanje wamandla obugqi. Kwaye mhlawumbi ngoku ungawuphendula umbuzo esiqale ngawo: unazo izakhono zengqondo?
Umsebenzi wobugcisa 'Imfazwe yePlanethi yee-Apes' Ihlaziya iXesha lokuBonwa kweXesha
I-AT & T ifikelela kwisivumelwano nabasebenzi bemanyano emva kwempikiswano yonyaka
Ngaba 'Uxolo Ngokukuphazamisa' Uya kuyiphelisa iMbalela yeOfisi yeBhokisi yamaKomidi?
Ithetha Ntoni Ukuba Ufihla Ubuhlobo Ne-Ex
nini ixesha elitsha lokungabi nazintloni
piaget wayeqinisekile ukuba ingqondo yomntwana
ukuthandana app for ubudlelwane
Ezona pilisi zintle zokunciphisa umzimba ngokukhawuleza
Kutheni ndikhangeleka ndahlukile kwimifanekiso kunasesipilini
Iipilisi zokutya zamandla kunye nokunciphisa ukutya